El Cañueloသဲသောင်ပြင်, သည် Costa del Sol တွင်အလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကမ်းခြေ
El Cañueloကမ်းခြေသည်လှပသောနေရာတွင်အလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ကော်စတာ del Sol။ ၎င်းသည် Malaga မြူနီစီပယ်တွင်တည်ရှိသည် Nerjaဒါဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသဲisရိယာဖြစ်သော်လည်း, အိမ်နီးချင်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် ဂရာနာပြည်နယ်.
သို့သော်ဤကမ်းခြေ၏ထင်ရှားသောအရာသည်၎င်း၏အထင်ကြီးသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Maro-Cerro Gordo ကမ်းပါး။ ဤအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းကြောင့်၎င်းကိုကားဖြင့်အလွယ်တကူတွေ့နိုင်သော်လည်း၎င်းမှာလူသိများသော ၀ င်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဤသည်က၎င်းအား၎င်း၏ကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ တိတိကျကျဆိုရလျှင်မလဂါကမ်းခြေရှိအခြားသဲareasရိယာများပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ El Cañueloကမ်းခြေကိုသင်ပိုမိုသိလိုလျှင်ဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
1 El Cañueloကမ်းခြေ, အထူးအခွင့်အရေးရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
3 El Cañueloကမ်းခြေကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
4 El Cañueloကမ်းခြေပတ်လည်မှာဘာကြည့်ရမလဲ။
4.1 Nerja ဂူ
El Cañueloကမ်းခြေ, အထူးအခွင့်အရေးရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် cove el Cañueloဒီကမ်းခြေဟာအရှည်မီတာသုံးရာငါးဆယ်လောက်ပဲရှိပြီးအကျယ်တစ်ဆယ်ရှိမယ်။ ငါတို့ပြောသည့်အတိုင်းမာရူ၏ချောက်ကမ်းပါးသည်ချောက်ကမ်းပါးကိုဝိုင်းရံထားသည်။ ဤရွေ့ကားမြင့်သောအရပ်, အချို့သောနေရာများတွင်, အမြင့်နှစ်ရာငါးဆယ်အမြင့်သို့ရောက်ရှိနှင့်နောက်ဆုံးတောင်ခြေဖွဲ့စည်း Alhama, Tejeda နှင့် Almijara တောင်တို့ဖြစ်သည်.
ထို့ကြောင့်၊ ဤဒေသရှိအခြားလှပသောကမ်းခြေများကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ သူတို့အထဲမှ၏ အဆိုပါ Alberquillas ၏လှိုင်း Cantarriján, အဆုံးစွန်သော nudism အဘို့အလတ်။ သင့်မှာအခွင့်အရေးရှိရင်ပင်လယ်ကနေဒီကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာကိုခံစားပါ။ ကမ်းခြေmetersရိယာမှမီတာနှစ်ရာအကွာအဝေးနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်ငါးဆယ်အကွာအဝေးအထိရေကြောင်းသွားလာမှုကိုခွင့်ပြုထားသည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်ပင်လယ်မှသင်သည်အထင်ကြီးဖွယ်ချောက်ကမ်းပါးများကိုခံစားနိုင်ပြီးသင်ကဲ့သို့သောမျိုးစိတ်များကိုလည်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မည် မျိုးရိုးဗီဇ သို့မဟုတ် တောင်ဆိတ်, ဖော်ပြထားသောတောင်များထံမှဆင်းရာ။ တဖန်သင်တို့မြင်ရကြလိမ့်မည် ကွမ်းခြံကုန်း, peregrine လင်းတ y အဝါရောင် -degg seagulls.
သီးခြားareaရိယာတွင်ရှိနေသော်လည်းဤသဲareaရိယာသည်ကမ်းလှမ်းသည် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး သငျသညျကမ်းခြေမှာလှပသောနေ့ကပျော်မွေ့ရန်လိုအပ်သည်။ ကား၏ကားရပ်နားရန်နေရာရှိပြီးတောင်ထိပ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အကာအကွယ်ပေးထားသောisရိယာဖြစ်သဖြင့်သင်သည်ခြေလျင်ကမ်းခြေကိုခြေကျင်လျှောက်ရမည်။ သို့သော်သဲသောင်ပြင်၌ပင်ချန်ထားသည့်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိပါသည်။
၎င်း၏ရေများသည်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးရေငုပ်ခြင်းအားလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အမှန်တကယ်အံ့မခန်းဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတွင်ဥပမာအားဖြင့်၊ သန္တာလိမ္မော်ရောင်တစ် ဦး မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိမျိုးစိတ်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့်ဤအရာကိုအလယ်အလတ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ပါက၊ ၎င်းသည်ကျောက်စရစ်areasရိယာများရှိသော်လည်းအဲလ်ကနူးလူလိုကမ်းခြေသဲများမှာအဖြူရောင်ဖြစ်သည်။
ဒီကမ်းခြေကိုရောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကအနားမှာပါ အဝေးပြေး။ Nerja မှလုပ်ရန်သင်ယူရမည် N-340 Almuñécar၏ညှနျကွားထဲမှာပြီးတော့ယူပါ ထွက်ပေါက် 402။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်အယ်လ်မာရီယာသို့သွားသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်သင်သွားလျှင်သင်ထွက်ရန်ရှိသည် la Herradura နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ယူပါ N-340, ဒါပေမယ့်၏ညှနျကွားထဲမှာ ဂါ.
သင်သည်ချောက်ကမ်းပါးထိပ်ကိုရောက်လိမ့်မည်။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့ကားကိုချန်ထားပါနှင့်ယူပါ ဘတ်စ်ကား ကမ်းခြေကိုဆင်းသွားကြဖို့။ ခရီးစဉ်အတွက်လူတစ်ယောက်ကိုယူရို ၂ ဒေါ်လာလောက်ပေးရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဒီစက်ဝိုင်းသည် ၁၃ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည် NerjaCosta del Sol ရှိအလှပဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ်းခြေရှိသင်၏တစ်နေ့တာအားလာရောက်လည်ပတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။
Nerja တွင်ပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းလေးသောင်းနှစ်ထောင်ခန့်ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုမှာဂူအတွင်းရှိဂူပန်းချီကားများဖြစ်သည်။ ဤလှပသောမာလဂမြို့တွင်သင်မြင်နိုင်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
မှာတွေ့ရပါတယ် MaroCañueloကမ်းခြေနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ ဟုတ်တယ် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှု ၎င်းတွင်အထင်ကြီးလောက်သော stalactites နှင့် stagagmites များနှင့်အခန်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင် Neolithic ခေတ်မှအသုံးအဆောင်များစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုထက်မကဂူသည်ထင်ရှားသည် ပန်းချီကား ငါတို့သည်သင်တို့မှဖော်ပြခဲ့တဲ့သော အမှန်မှာ၊ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုကိုယ်စားပြုသောအချို့သည်လူသားတို့ဖန်တီးသောရှေးအကျဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ Nerja ဂူပါ ၀ င်သည့်အခန်းများထဲတွင် Cataclysm, the Waterfalls သို့မဟုတ် Ghosts စသည့်ညံ့ဖျင်းသောနာမည်များဖြင့်အချို့ကိုသင်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ဒီနာမည်ကပေးထားတယ် သတိထားပါ အဲ့ဒီ့ကြောင့်သင်ဟာ Malaga ကမ်းခြေကိုထူးခြားတဲ့ရှုခင်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ သူ၏အမည်အားဖြင့်အဆိုပြုထားခဲ့သည် ရှငျဘုရငျ Alfonso XII၁၈၈၅ တွင် Nerja သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းရှုခင်းများကြောင့်ဖမ်းစားခံခဲ့ရသည်။ Chanquete, ရှုထောင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Verano azul စီးရီးမှတံငါသည်အဟောင်း။
Malaga မြို့၏ဘာသာရေးအမွေအနှစ်၌ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားကျောင်း၁၇ ရာစုကတည်ဆောက်ခဲ့သော Baroque နှင့် Mudejar အဆောက်အအုံသည်နံရံပန်းချီကားများဖြစ်သည် Francisco က Hernandez။ တစ်ချိန်တည်းပိုင်သည် အံ့ဖွယ်ဘုရားကျောင်း, Maro အတွက်၎င်း၏ဥပဒေကြမ်းအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင့်အားလာရောက်လည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Las Angustias ၏ရသေ့, Baroque နှင့်ထံမှပန်းချီကားများနှင့်အတူတန်ဆာဆင်သည့် cupola နှင့်အတူ Alonso Cano ၏ Granada ကျောင်း.
Nerja the သို့သင်လည်ပတ်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းဖြစ်သည် Ingenio de San Antonio Abadမလဂါကမ်းခြေရှိနောက်ဆုံးထိန်းသိမ်းထားသကြားစက်ရုံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ Aguila ရေလမ်းကြောင်း၎င်း၏လေးထပ်သည် Coladilla မြစ်ကိုဖြတ်သန်းသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Nerja ဂူထဲမှာတွေ့ရတဲ့အပိုင်းအစတွေအများကြီးတွေ့ရမယ့်ဒီပြတိုက်ကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ပိုမိုမကြာသေးမီကသမိုင်း Malaga မြို့ကနေ။ ၎င်းသည်Balcón de Europa နှင့်အလွန်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာ အယ်လ်ကင်နူးလိုကမ်းခြေ ၎င်းသည်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တည်ရှိသောသေးငယ်သောသဲ.ရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအလွန်အကျွံမလည်ပတ်ပါက၎င်းသည်တစ်နေ့တာသည်သင့်အားထူးခြားသောပင်လယ်ကြမ်းပြင်နှင့်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ခရီးကိုဖြည့်စွက်ရန်လှပသောမြို့ကိုသင်လည်ပတ်နိုင်သည် Nerja၎င်း၏ကျော်ကြားဂူနှင့်အတူ။ အဲဒါကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ခရီးသွားလုပ်ငန်း » အယ်လ်ကင်နူးလိုကမ်းခြေ
Córdoba၏ Patios ၏ပွဲ